पुण्यकाे धाममा पापको घडा ! - Aarthiknews
पुण्यकाे धाममा पापको घडा !
मंगलबार, २९ पुस २०७६
काठमाडौं । राजधानी शहर काठमाडौँ आएका हरेकको पहिलो गन्तब्य हो, पशुपतिनाथको मन्दिर । जहाँ मानिसहरु श्रद्धाले जान्छन् । पुण्य कमाउने हेतुले पाइला राख्छन् । भूलवस भएका पाप मोचानको अपेक्षा गर्छन् ।
तर, त्यही पुण्यभूमिमा पापको घडा भर्नेहरुको पनि कमी छैन । भन्ने गरिन्छ, सत्कर्म र दुष्कर्म उही सिक्काका दुई पाटाहरु हुन् । त्यसैले असल र खराब नियत भएका दुवै खालका मानिसहरु पशुपतिमा भेटिन्छन् ।
पछिल्लो समय पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनहरुभन्दा पनि पर्यटकहरु धेरै भेटिन थालेका छन् । र, यिनै पर्यटकको हुलमा सँगै मिसिएर पाशुपति क्षेत्रमा चोर पनि भित्रिएका छन् ।
पशुपतिमा सामान चोरीको विषय नौलो होइन । केही न केही सामान हरायो भन्ने मानिस दिनहुँ भेटिन्छन् । मानिसहरू यस्ता घटना दिनदिनै बढ्दो मात्रामा हुने गरेको बताउँछन् । त्यहाँ पनि अन्य क्षेत्रमा चोरी हुनुलाई स्वाभाविक भन्न मिल्ला तर स्वजन देहावसानको पिंडामा परेका र काजक्रिया बसेको स्थानमा चोरी गर्नु चाँही निकृष्टताको पराकाष्ट हो ।
यस्तो स्थानमा बाहिरको मानिसले छुन नहुने, चोखो ठाउँमा बस्नुपर्ने हाम्रो धार्मिक मान्यता रहेको छ । काठमाडौँमा घर नहुने वा घरमा काजक्रिया गर्न नचाहानेहरूले पशुपतिमा मृतकको दाहसंस्कार गरे संगै त्यही कोरो बस्ने गरेका छन् ।
बानेश्वर बुद्धनगरबाट आमाको क्रिया बस्न आएका बसन्त केसीको क्रिया बसेकै कोठाबाट बिहान लगभग ३ः३० बजेतिर मोबाइल हरायो । उनले दुखेसो पोख्दै भने ‘‘कतै ढोका पनि खोलेको छैन झ्याल पनि खोलेको छैन । चिसो भएर हिटर बालेका थियौ हिटरको हावाले सास फेर्न गाह्रौ हुन्छ भनेर भ्यान्टिलेसन खोलेका थियौ । त्यहीबाट हात छिराएर मोबाइल चोरी गरेको छ ।’ मोबाइल हराएको गुनासो पशुपति विकास कोषका अधिकारीहरु समक्ष गर्दा जवाफ आयो, ‘राति गार्ड बसेकै हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन । आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ।’
केसी २ नम्बरको कोठामा बसेका छन् । ‘राती मोबाइल चोर्न आउने चोर टाढाको होइन किनकि टाढाको चोरलाई मोबाइल, ल्यापटप कहाँ राखेको छ कसरी थाहा हुन्छ ?’ त्यहाँ भित्रकै मान्छेले चोरेको आशंका व्यक्त गर्दै उनले प्रश्न गरे ।
मोबाइल चोर्ने चोरले भोलि मानिसहरू सुतिरहेको ठाउँमा अनैतिक घट्ना नघटाउला भन्न सकिंदैन । तर, यस विषयमा पशुपति विकास कोषले लापरबाहि गरेको त्यहाँका सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।
के भन्छ कोष ?
पशुपति विकास कोषका अनुसार प्रत्येक गेटमा गार्डको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपतिमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र कोषको गार्डले नियमित सुरक्षा र हेरचाह गरिरहेका हुन्छन् । प्रहरीले बेलाबेलामा गस्ती समेत गर्ने गरेको पशुपति विकास कोषका प्रशासकिय अधिकृत गौरीशंकर पराजुलीले बताए ।
उनले भने ‘‘पशुपति क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार गार्ड राखेका छौ । रातिको समयमा गार्डले अनुगमन गरिरहेको छ भन्ने जनाउन गार्डलाई खम्बामा लाठीले हान्न लगाएका छौ । यहाँ सुत्ने मान्छेलाई डर नलागोस, सुरक्षित रहेको कुरामा आस्वस्त बनुन् र बाहिरी मान्छे आउन नसकुन भनेर त्यसो गरिएको हो ।’
मनग्गे आम्दानी तर दुर्गन्ध उस्तै
पशुपतिमा क्रिया गरेबापत वार्षिक ६० देखि ७० लाखसम्म आम्दानी हुने पशुपति विकास कोषले जनाएको छ । आम्दानी अनुसार पशुपतिमा सरसफाइको काम भने भएको देखिंदैन । यतिसम्म कि एउटा क्रियापुत्रिले प्रयोग गरेको कपडा सफा नगरी फेरी अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने जस्ता समस्या रहेका छन् ।
सरसफाइका सम्बन्धमा पनी केसीको गुनासो देखियो । उनले भने ‘‘यहाँ चोरीको समस्यासंगै सरसफाइमा पनि समस्या रहेछ । अरूले एक चोटी प्रयोग गरेर गएको ब्ल्याङकेटहरू धोएर सफा गरेर पो अरूलाई ओढ्न दिनु पर्छ । यहाँ त एउटाले ओढेर जान्छ त्यो लगेर राख्ने र अर्को व्यक्ति आउदा पुन त्यही ओढ्न दिने परिपाटी रहेछ ।’
पशुपति क्षेत्रमा जहाँ क्रियापुत्री बस्ने कोठाका झ्यालहरू पनि अस्तव्यस्त छन् । कतै झ्यालको सिसा फुटेको छ त किनेको चुकुल बिग्रिएको छ ।
पशुपतिमा क्रिया बस्नको लागि ४० वटा कोठा रहेको छ । त्यसमध्ये बाथरूम सहितको कोठाको दैनिक ५ सय र अरूको २ सय रूपैंया भाडा लिने गरेको कोषले जनाएको छ ।
कर तिर्नु भएको छैन ? यो मौका नगुमाउनुस्
घुस लिएको अभियोगमा ६ प्रहरी निलम्बित, घुस दिन खोज्नेलाई कारवाही
लकडाउनका कारण १४ लाख क्षयरोगका बिरामी मृत्युको मुखमा
लापरबाहीले कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्दै विराटनगर
अझै तीन दिन पानी पर्ने
रेमडिसिभिर औषधि दर्ता गर्न औषधि विभागको आलटाल, अवैध तरिकाले भित्रदै
फेसबुकका कारण भारतमा हिंसा, प्रहरीको गोलीबाट २ जनाको मृत्यु
भारतीय मूलकी कमला अमेरिकामा उप-राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार
एशियन लाइफको नाफा बढेर १८ करोड नाघ्यो
घट्यो बैंक अफ काठमाण्डूको नाफा, निष्क्रिय कर्जा बढ्यो, आधार दर घट्यो
समाज लघुवित्तले आईपीओ निष्काशन गर्दै
वाईफाई कनेक्सन कसैले चोरेको छ की छैन ? यस्तो छ थाहा पाउने तरिका
बढ्यो साधारण शेयर बिक्री गर्ने क्रम
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको आईपीओ बाँडफाँट, ९७ हजार ३४४ जनाको हात खाली (आईपीओ नतिजा सहित)
कोरोनाका कारण थप एक जनाको मृत्यु